एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन : बिडारी – Shasankhabar
एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन : बिडारी
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको आज बुधवारको बैठकमा बोल्दै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको दाबी गर्नुभएको हो ।
हिजो मङ्गलवार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमसीसी के गर्नुहुन्छ भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिने क्रममा उहाँले एमसीसी संसदमा ल्याउनैपर्ने कारणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो । एमसीसीबारे सभामुखलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद बिडारीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाएर पो हो कि , भन्ने प्रश्न तेर्स्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले नेपालको भूमि कहिले उसको नक्सामा हाल्यो । याद गरिराखौँ, कहिले हाल्यो ? अहिलेसम्म हाल्न सकेको थिएन । जब ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, ट्याक्क भारतले नेपालको जमिन उसको नक्सामा हाल्यो । त्यतिमात्र हो र ? नेपालको भुइँमा सडक बनाएर भारतको मन्त्रीले उद्घाटन गर्‍यो । कहिले ? ओलीजीको पालमा । किन गर्‍या रे ? खासाकखुसुक गरेर पो हो कि । कुरा मिलाएर पो हो कि ।’
सांसद बिडारीले ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै निजामती कर्मचारी र भूमिसम्बन्धी कार्यालयमार्फत सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।